Afarta Kooxood Ee Midkood Ku Guuleysanayso Champions League, Saamayn La'aanta Messi Iyo Sida PSG Ugu Hungowday Xiddigaheeda - Laacib
HomeWararka Champions LeagueAfarta Kooxood Ee Midkood Ku Guuleysanayso Champions League, Saamayn La’aanta Messi Iyo Sida PSG Ugu Hungowday Xiddigaheeda
Afarta Kooxood Ee Midkood Ku Guuleysanayso Champions League, Saamayn La’aanta Messi Iyo Sida PSG Ugu Hungowday Xiddigaheeda
Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi waxba kuma soo kordhin kooxdiisa Paris Saint-Germain, mana siin karo tallaabadii ay doonayeen inay hore ugu qaadeen ee ku guuleysiga Champions League, sida uu sheegay halyeygii difaaca Liverpool ee Jamie Carragher.
Paris Saint-Germain ayaa guul-darro 2-1 ah kala kulantay Manchester City xalay, iyagoo la yimid qaab ciyaareed liita oo inta badan kubadda ay maamulanaysay kooxda reer England.
Raheem Sterling iyo Gabriel Jesus ayaa meesa ka saaray gool uu ciyaarta ku furay Kylian Mbappe, sidaas ayaanay Sky Blues kaalinta koowaad ugaga soo baxday Group H, halka PSG ay iyaduna usoo gudubtay wareegga 16ka laakiin ay tahay kaalinta labaad.
Lionel Messi oo kusoo bilowday ciyaartii xalay ayaan wax saamayn ah ku lahayn garoonka, sidoo kalena Neymar ayaan la iman qaab ciyaareedkii lagu yaqaanay, waxaanu Jamie Carragher ku eedeeyey labadan ciyaartoy iyo sidoo kale Kylian Mbappe in aanay culays badan saarin Man City, si ay u guuleysan karaan.
Jamie Carragher oo ka hadlayay warbaahinta CBS Sports ayaa yidhi: “Afar kooxood ee Man City, Liverpool, Chelsea ama Bayern Munich ayaa ku guuleysan karaya Champions League, laakiin PSG gebi ahaanba ma laha wax fursad ah oo ay ku qaadayso Champions League.
“Lionel Messi wax fursad ah oo ay ugu guuleysan karayso Champions League kuma soo kordhin PSG. Waan daawaday, ilamana aha inuu wax kusoo kordhin karayo.”